“ဘလက်ကောင် ၏ အနက်ရောင်အတွေးများ” ၂ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » “ဘလက်ကောင် ၏ အနက်ရောင်အတွေးများ” ၂
“ဘလက်ကောင် ၏ အနက်ရောင်အတွေးများ” ၂
Posted by black chaw on Oct 25, 2011 in Myanmar Gazette, Think Different | 22 comments
သူငယ်ချင်းအပျိုကြီးတစ်ယောက် မင်္ဂလာဆောင်သွားတဲ့အပေါ် သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးတွေ နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက် မတူတဲ့အပေါ် ခံစားရေးဖွဲ့ထားတဲ့ weiwei ရဲ့ feeling 40 ကတော့ အပျိုကြီးတွေရဲ့ အတွေးတစ်ပိုင်းတစ်စကို ဖတ်ရမှာပါ။ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြည့်ကြဘို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
Feeling 40 နဲ့ တွဲဖတ်ဘို့ ညွှန်းထားပါတဲ့ ကိုသစ်မင်းရေးတဲ့ပို့စ်လေးက ဘာအကောင်းဆုံးလဲ ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးပါ။
ကိုသစ်မင်း ရဲ့အတွေးအရေးကို အားလုံးလည်းသိပြီးသားမို့ ညွှန်းစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဖတ်ကြည့်ပါ။
နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ weiwei ရဲ့ guilin ခရီးစဉ် အပိုင်း ၁ ဖြစ်ပါသည်။ ဓါတ်ပုံလေးများပူးတွဲပါဝင်ပါသော ခရီးသွားဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်ဘို့ တိုက်တွန်းပါသည်။ ပို့စ်ထဲတွင်ပါသော ဓါတ်ပုံများထဲမှ တီရှပ်နဲ့ ဘလူးဂျင်း ၀တ်ထားသူလေးကို ရွာသားများစိတ်ဝင်စားကြပါသည်။
နောက်တစ်ပုဒ်က comegyi ၏ မန္တလာမြေခရီးစဉ်အပိုင်း၂ ဖြစ်ပါသည်။ ဖတ်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။
မျိုးထက်၏ တရားသူကြီးအိပ်မက် နှင့် ရွှေတိဂုံစေတီရင်ပြင်တော်မှာ သင်္ချိုင်းရှိခဲ့ဘူးတာ သင်သိလားတို့ကိုလည်း
ကိုပေါက်လမ်းသလားနေသည် ၁၉ (ဖေါင်တော်ဦး) ပို့စ်လေးအတွက် ကိုပေါက်ကိုကျေးဇူးစကားပြောချင်ပါသည်။
မမှီ ၏ ဂျေရုစလင် ၂ အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါရစေ ခင်ဗျား။
ဖားတုလို့ခရုခုန် အမေရိကန်ကိုတုလို့ တရုတ်ကြီးကခုန်အုံးမယ်တဲ့ဗျာ ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကို ကိုရင်မောင်က ရေးပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။
လွမ်းမောစရာ တစ်နေရာ ဆိုသောပို့စ်လေးကို မနောဖြူလေးက တင်ပါသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဓါတ်ပုံလေးများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပါခင်ဗျား။
ဒီတစ်ပတ်အတွက် အားရစရာပို့စ်တွေထဲမှာ ပါဝင်ပါတဲ့ ရွာသူရွာသားတို့အတွက် စကားလက်ဆောင် တို့ခေတ်ရောက်မှ ညံ့ကြတော့မှာလား ကို padonmar ကရေးပါသည်။ ကွန်းမန့်လေးများနှင့်တွဲဖတ်ကြည့်စေ ချင်ပါသည် ခင်ဗျား။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကိုယ့် ဘာသာကာကွယ် ပို့စ်လေးအတွက် ရွှေအိမ်စည်ကိုကျေးဇူးတင်ရပါသည်။ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြရမည့် ပို့စ်လေးပါခင်ဗျာ။
ကိုဖက်တီး၏ နောက်ဆုံးလက်ကျန် ပစ္စုပ္ပန် ကတော့ မိခင်မေတ္တာဖွဲ့လေးပါ။ ကောင်းပါသည် ကိုဖက်တီးခင်ဗျား။
ကိုသစ်မင်းကတောင် ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီး ချက်ခြင်းပဲ အမေပို့စ်တစ်ခုကောက်ရေးသည်အထိ ဖြစ်သွားပါသည်။ ကျေးဇူးရှင် ဆိုတဲ့ပို့စ်လေးအတွက် ကိုသစ်မင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါသည်ခင်ဗျား။
လယ်တွင်းနယ်က ခေတ်ငါးခေတ် ထပ်ဆင့်ကုသိုလ် ရှင်ပင်ရွှေဆပ်သွား ပို့စ်အတွက်လည်း ကိုစိန်သော့ကြီး ကို ကျေးဇူးတင်ရပါသည်။
မိုးထဲရေထဲကျိုက်ထီးရိုးခရီးသည် ရွှေတိုက်စိုး ၏ ဓါတ်ပုံလေးများကလည်းလှပါသည်ခင်ဗျား။
ဒီတစ်ပတ်၏ အထူးခြားဆုံး ဖြစ်စဉ်ကတော့ ဆရာမ ဆူး ၏ ပို့စ်တစ်ခုတက်လာခြင်းနှင့် ကွန်းမန့်များလည်း ချီးမြှင့်လာခြင်း ဟု ထင်ပါသည်။ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။
ဆူးရေးသားသောပို့စ်ကတော့ တစ်ဦးချင်းစီပြုပြင်နိုင်ပါ့မလား ဖြစ်ပါသည်။
ပြုပြင်စေချင်သည့်စေတနာဖြင့် ရေးသော ပို့စ်လေးဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။
ဒီတစ်ပတ် ပို့စ်တွေတက်တာ တော်တော် များပါသည်။ ဘလက်ချောလည်း အီစလံဝေသွားပါသည်။ ကျန်ခဲ့ပါသော၊ အသေးစိတ်မရေးနိုင်ပါသော ပို့စ်ပိုင်ရှင်များအား အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
ဘလက်ချော တစ်ယောက်တည်း ဒီအပတ်အတွက်အကောင်းဆုံးအဖြစ် ရွေးခြယ်ဖြစ်သော ပို့စ် လေးကိုတင်ပြချင်ပါသည်။
ကိုသစ်မင်းရေးပါသော သည်အလှူ ဆိုသည့် ပို့စ်လေးကို ဒီတပတ်အတွက် မန်းဂဇက်၏ အကောင်းဆုံးပို့စ် ဟု သတ်မှတ်ချင်ပါသည်။ ရွာသူရွာသားများအနေဖြင့် သဘောမတူ ပါကလည်း ဇောဒက တက်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော် တစ်ဦးတည်း၏ ထင်မြင်ချက်သာ ဖြစ်ပါသဖြင့် အကြိုက်ခြင်းမတူပါက ပွင့်လင်းစွာ ဝေဖန် ဆွေးနွေး နိုင်ပါကြောင်း
နောက်တစ်ပတ် etone ပို့စ်မှ ပြန်စပါမည်။ မန်းဂဇက်တွင် ကာတွန်းလေးများ မြင်ချင်မိပါကြောင်းတင်ပြရင်း ဘလက်ချော အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်ပါပြီ ခင်ဗျား။
သည်းခံပြီးသာ ဖတ်ပေးကြပါ ဆရာဆရာမတို့ခင်ဗျား။
သဂျီးတို့ လို အဘိုးကြီးတွေအတွက် မျက်မှန်တပ်စရာမလိုတော့ဘူး
ဘယ်ဂလိုဖြစ်ကုန်တာတုန်း။ ပထမပိုင်း အပေါ်မှာဖတ်တုန်းက အကောင်း၊ အောက်ဖက်လည်းကျရော စာလုံးကြီးတွေက အကြီးကြီး ဖြစ်သွားရော…
ငယ်ငယ်က မြန်မာစာ စာစီစာကုံးရေးတာ မြန်မြန်ပြည့်အောင် လက်ရေးကျဲကျဲရေးသလို ဖြစ်နေပြီ
ကိုဘလက် ပို့ စ် ကို
ကွန်နက်ရှင် က ဆီလီကွန် ဝင်ထိုးပေးသွားတာ ထင်ပါရဲ့ 
သည်အလှူကို ဒီတစ်ပတ် စာဖတ်သူအကြိုက်အကောင်းဆုံး ရွေးတာ သဘောတူပါတယ်။
ကိုသစ်မင်းရေးတဲ့ သည်အလှူ ဆိုတဲ့ ပို့စ် ကို ဒီတစ်ပတ်အတွက်
အကောင်းဆုံးပို့စ် အဖြစ် ကျွန်တော် တင်ပြပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့ ပို့စ်လေးတွေ လည်း တင်ပြကြပါဗျာ။
အစက မန်းမလို့ ဒါပေမယ့်မန်းရင်းနဲ့ကဗျာတပုဒ်ဖြစ်သွားတယ် တင်လိုက်ပြိဗျာ။
တသက်မမောတဲ့ဘလက်ချောရေ ခင်ဗျားစာဖတ်ပြီး ကဗျာတပုဒ်ရသွားလို့ကျေးဇူးပါ။
ကျွန်တော် ကတော့ ရှက် နေလို့ရွေးမတတ်တော့တာနဲ့.
ကျေးဇူးရှင်.သည်အလှူ မှာ..ဘာအကောင်းဆုံးလဲ..ဗျာ ?
ကျနော်ရေးတဲ့ စာ ကို ကောင်းတယ်လိုရွေးချယ်တဲ့ ကိုဘလက်ချောနဲ့ သဘောတူကြတဲ့ မိတ်ဆွေ အပေါင်းကိုကျေးဇူးပါခင်ဗျ။
ကျနော်က စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ရေးချတဲ့နေရာမှာ “တခုခုပေးချင်တဲ့”စေတနာကိုထဲ့ပေးပါတယ်။ပြောလိုတာကပို့စ်တင်တဲ့ သူတိုင်းမှာရှိနေကြသလိုကျနော်မှာရှိတာမျိုးပါဘဲ။
ဘာလိုလဲဆိုတော့ဖြော်ဖြေရေး၊ ဗဟုသုတ၊ စိတ်ခွန်အား၊ မေတ္တာစိတ်၊သတင်း၊အစရှိတဲ့ပေးစရာတခုခုကို ဒီမှာရေးတဲ့ရေးဖော်များအားလုံးကလဲထဲ့ပေးနေကြတာတွေ့ရလို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ဂေဇက်မှာရေးရတာ တခြားမှာရေးရတာနဲ့မတူပါဘူး။ရှည်လွန်းရင်လူမဖတ်တတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့်ဒီလိုစာတွေရေးတတ်အောင်လို့ ဒီကဆရာတွေရဲ့စာတွေကိုဖတ်ရင်းသိလာတဲ့အသိမလို့ ကျနော်စာရေးတာကောင်း
(ကျနော့အနေနဲ့ ရွေးရရင်) အားလုံးဟာစေတနာနဲ့၊ဂေဇက်ကိုချစ်ခင်စိတ်နဲ့၊အချိန်ကုန်ခံ၊ငွေကုန်ခံ၊မိန်းမအညိုအညင်ခံ၊ရီးဇား
ကဲ ဘယ်သူ ငြင်းမလဲဗျာ??????????????????????????
ကိုသစ်မင်းရေ…ပြောသါားတာလေးကို လက်ခံပါတယ် ။ ဒီပို့ စ်လေးကိုလည်း ကျေးဇူးပါပဲ။
ရေလည်ခိုက်သွားပြီ…။ ပို့စ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အနက်ကို
တိုတိုတုတ်တုတ် ရှင်းပြသွားတာ အလွန်ကောင်းပါတယ်…
(ကိုယ့်နာမည်လေးများပါလာမလားလို့5ခေါက်တောင် ဖတ်တာ..
တားနာမည်လည်း ပါဝူး… တားတားရှက်ရှက်… ဟိ :D)
ဂေဇက်မှာ ပင်တိုင်ရေးနေကြတဲ့ သူအားလုံး အရည်အချင်းရှိပြီး
အတွေးအခေါ် အရေးအသား ကောင်းကြသူတွေလို့ ပဲ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။
ခုတစ်လအတွက် Best of Writer ကိုတော့ ကိုသစ်မင်းလို့ မြင်မိပါတယ်။
ကျွန်တော် တစ်ပုဒ်တစ်လေကလွဲလို့ အကုန်ဖတ်ပါတယ်။
အစဉ်လိုက်ဖတ်သွားတာပါ။ ကိုရင်ကလည်း ခုတစ်လော
နောက်တစ်ပတ်မှာ ကိုရင် ရဲ့ ထစ်နေတဲ့ စီဒီ ပါမယ်လေဗျာ။
အိုကေ.. ဘလက်ချောရေ.. ခုတစ်လော
ကျနော်လည်း မအားတာနဲ့ ခဏပျောက်သွားပါတယ်..
နောက်တစ်ပတ်ပါမယ်ဆိုတော့.. ခုကတည်းက ရင်ခုန်ထားလိုက်မယ်..
စေ့ဆော်လိုက်တဲ့ “စာ” က
လေ့ပျော်အကြိုက် “ရသာ” ပြ
မွေ့လျော်ထိုက်တဲ့ရွာ ဗျ။
ကိုယ်တွေလို တစ်ပတ်မှ တစ်ခါလောက်ပဲ ၀င်တဲ့ သူကျတော့ အခုလို ပို့စ်လေးဖတ်လိုက်ရမှ ဘယ်ဟာတွေက ကောင်းသလဲဆိုပြီး ဖတ်ရတာကျေးဇူးပဲဗျာ
ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့က ဘလက်ချောကို မှတ်စုထုတ်ပေးထားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါသတဲ့။ (ပြောမဲ့သာပြောရတယ် သူကိုယ်တိုင်များလားတောင် မသိဘူး)
ဦးကြောင်ကြီးကတော့ ကိုဘလက်ကို ဆားပုလင်းပြောနေပြီနော်..
မခံနဲ့ ပြန်ပြောလိုက်.. ကျနော်က SB ကလို့.. ဟီးး
(စတာနော်.. စိတ်မဆိုးနဲ့… )
မကြောက်ပါနဲ့ .. ဦးကြောင်ကြီးနဲ့တွေ့ရင် ဘ၀ စုံစေရမယ်.. :grin:
ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်ကို ကွန်ပြူတာယူထားပြီး အင်တာနက် သုံးနေတာမို့ အွန်လိုင်းမှာ ပြန်မြင်နေရတာပါ။
ညည အိမ်ရောက်မှ သုံးတော့ သန်းခေါင်ရောက်မှ ထိုင်ရာ ထတော့ အ်ိပ်ရေးပျက်တာ များနေလို့။
ဆူးမမကို စတင် သတိထားမိတာက မှတ်မိဦးမလား ““ ဗမာ့ကြောက်သွေး ”” ဆိုတဲ့ ပိုစ့်မှာပါ ။
အတွေးပြတ်ပြတ်နဲ့ ရေးရဲ ပြောရဲ တဲ့ မဆူးကို အဲဒီထဲက မှတ်မိခဲ့ပါတယ် ..
မှော်ဆရာ လဲ အဲဒီ့အချိန်ကစပြီး ရွာထဲ ၀င်လာခဲ့တာပါ …
ဆူးမမကို ရွာထဲမှာ အတန်ကြာ မတွေ့မိတော့ သတိတောင် ရနေမိသေး …
ပြန်လာတာ ၀မ်းသာပါ၏ ။